निशा कंडेलको नयाँ गीत 'सँधैलाई' को भिडियो सार्वजनिक
HOME » निशा कंडेलको नयाँ गीत 'सँधैलाई' को भिडियो सार्वजनिक
निशा कंडेलको स्वरमा रहेको गीत 'संधैलाइ' को अफिसियल भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । लामो समय संगीत सिकेर गीत रेकर्ड गरेकी निशाको यो पहिलो अफिसियल गीत र भिडियो हो ।
अमन प्रधानको शब्द तथा संगीतमा बनेको भिडियो उत्कृस्ट बनेको छ । राहुल प्रधानको संगीत संयोजन रहेको गीतमा गायिका कंडेलको स्वर सुहाएको छ । गीतले मायामा परेको र आफ्नो प्रेमी प्रति संधै समर्पित भाव बोकेको छ।
केबीए ग्लोबल एजुकेसन एण्ड माईग्रेसनले युवा तथा प्रतिभा भएका कलाकारहरु लाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । अस्ट्रेलियाको सिड्नी,डार्विन,पेर्थ अनि फिलिपिन्स र नेपालमा काठमाडौँ,चितवन,बुटवल,नेपालगंज,पोखरा र बनेपामा कार्यालय संचालनमा छन् ।
ज्योति मगरलाई पनि मात दिने रिया श्रेष्ठको उत्तेजक प्रस्तुती (भिडियो सहित)
जागिर चट् गरिदिएपछि आईजीपी खनाललाई एक प्रहरी जवानको गम्भिर प्रश्न !
डान्सरको अवतारमा पर्दामा आउँदै कैट (भिडियो सहित)
को हुन् कोटेश्वरको कमान्ड सम्हाल्ने यी सुन्दरी इन्स्पेक्टर ? (भिडियो रिपोर्ट)
सर्पले टोकेपछि धामीकहाँ लगियो, त्यसपछि अस्पताल पुर्याउँदा २ जनाको मृत्यु
माल्दिभ्सको समुन्द्री तटमा सोनाक्षीको हट अवतार (फोटो फिचर)
संविधान दिवसमा नेताहरुबीच स्टुडियोमै कुटाकुटको स्थिति (भिडियो)
सुनसरीमा मारिने प्रधानाध्यापकमाथि भारतीय मिडियाको गम्भीर आरोप
भाजपा नेता जोलीको प्रम ओलीलाई पत्र ‘त्रिभुवन विमानस्थल खतरनाक छ, छिटो बनाउनुस्’
नेपाली ताराका निकै लोकप्रिय गायक विनोद राईको 'यहाँ घाउहरु..' (भिडियो सहित)
नेपाल आइडलमा गाउन गएका प्रतियोगीको स्वरभन्दा डान्सको तारिफ, हेर्नुहोस् डान्स
मापदण्ड विपरीतका घरलाई नियमित गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरमा निवेदनको चाङ
क्रिकेट छोडेर फिल्म क्षेत्रमा करियर चम्काउन खोज्दै बिराट कोहली
आफू मरेपछि पत्नीलाई एक्लोपन नहोस भनेर गरे यस्तो, पत्नीले पाइन् कहिल्यै नसकिने माया
जनताको विश्वास र भरोसामा तलमाथि हुन्न : प्रधानमन्त्री ओली
गोल्डेन माइक विजेता निलिमा र मिनराजले स्टेजमा नाच्दै गाए 'नाच फिरिरि...' (भिडियो)